Sooyaalka Noloshii Sillooneyd. | Laashin iyo Hal-abuur
Sooyaalka Noloshii Sillooneyd.
Samatar wuxuu dhashay sanad ku aaddan 1987di. Isagoo sanad jira ayaa waxaa billowdey dagaalladii u dhaxeeyey Jabhadihii iyo dowladda. Samatar noloshasiisa wuxuu la kowsaday qax, oo waxaa dagaalkaas sababsaday aabbihii iyo laba walaalihii ah oo ka waaweyn inay ku dhintaan.
Samatar waxaa u baryey waa aan wanaagsanayn, waxuu maydkii rogrogayey muddo dheer, qaylo, oohin iyo qarracan ayuu kala duldhacay, ilaa markii dambe dad ku soo baxeen oo loo sheegay in waqtigeedii dhammaaday. Ma garan karo, sababta ay uga tagtay ogeysiis la’aan, mana garanayo cidda u bedeleysa, isagoo laba kabood oo dacas ah haysta ayuu u soo dhaqaaqay dhinaca magaaladu ka xigtay.
Samatar xitaa hadduu Alla bariyada (Kulanka ama Sabta) ka qaybgalo, waxaa lagu sooraa bannaanka, iyadoo laga qashaafayo, waxaana wax loogu daraa, Labaatan ka waaweyn, hadduu sacab bariis ah ka helo waa nasiibkii.
Samatar wuxuu galay gu’gii 7aad waxaana soo wajahdey marxalad kale…